Obbo Geetaachoo Baalchaa: Haleellaa Buraayyuutti raawwatee lubbuu namaa galaafateen shakkamtootni qoratamaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Geetaachoo Baalchaa: Haleellaa Buraayyuutti raawwatee lubbuu namaa galaafateen shakkamtootni qoratamaa jiru
Madda suuraa, Feesbuukii Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu
Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu
Haleellaa kaleessa Buraayyuutti raawwatee lubbuu namaa galaafateen shakkamuun namootni to'ataman poolisiidhaan qoratamaa jiraachuu Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Oromiyaa himan.
Kaleessa haleellaa Buraayyuutti raawwateen Itti Gaafatamaan Bulchiinsaaf Nageenya magaalaa Buraayyuu Komishiner Salamoon Taaddasaa ajjeefamaniiru.
Itti Gaafatamaan Poolisii Humna Addaa godina Addaa Naannaa Finfinnee Komander Tasfayee Dinquu fi miseensi poolisii biraa tokkoo fi weellisaa Dajanee Kaasayee waliin rukutamanii madaa'uun hospitaala galanii yaalamaa jiru.
Sirni awwaalchaa Komishinar Salamoon Tasfayee har'a, jechuunis Guraandhala 22,2020, raawwata kan jedhan Obbo Geetaachoon namootni madaa'an kaan haala gaarii irratti akka argamanis himaniiru.
Gocha kanaan namoota shakke poolisiin qulqulleessee namoota yeroo beellamaa itti gaafachuun seeratti dhiyeessuuf adda baasee ragaa qulqulluu nuuf hin laatne jedhan. Lakkoofsa namoota shakkamuun to'atamanis ammatti akka hin beekamne himan.
Haa tahu malee poolisiin kanaan duras hordoffii mataasaatiin namoota shakkuu fi gochaa kana keessaas harka qabu jedhee shakke to'achaa jira jedhan Obbo Getaachoon.
Haleellicha ilaachisee qaama kana keessaati kan shakkamee to'atame odeeffannoon jedhamu hin jiru jedhan. Komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa baaseen ammoo ''haleellaan guyyaa har'aa Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti namoota afur irratti raawwatame, humna ABO Shaneetiin hogganamuu fi maqaa Waraana biliisummaa fi Abbaa Torbeetiin of waamu ta'uunsaa mirkanaa'eera'' jedha.
Abbaan Torbee eenyu?
Lixa Oromiyaa bakka garaagaraatti ajjeechaan namoota dhuunfaa fi hoggansa mootummaa irratti yeroo garaagaraatti raawwataa ture garee 'Abbaa Torbeeti' jedhamuun ibsamaa ture.
Haa tahu malee Obbo Geetaachoon humni maqaan 'Abbaa Torbee' jedhamu kennameefii caasaan nageenyaa akka hojii isaa hin hojjenne danqaa tahe kun eenyu? kan jedhu karaa guutuu taheen qoratamee uummataaf ibsamuu qaba jedhan.
Maqaa dimshaashaa itti kennanii darbuun gaarii miti kan jedhan Obbo Geetaachoon kun waan qulqulleeffamee uummataaf beeksifamuu qabudha jedhan.
''Gareen kun miseensa WBOti moo? Humni adda tahee nageenya biyyaa booressuuf hojjetutu jira? kun qoratamee adda bahuu qaba. Sababni isaa humni abbuumaadhaan garee kana fudhatu hin jiru waan taheef'' jedhan.
ABO'n erga biyyatti galee waraana akkas jedhamu akka hin qabnee fi miseensa isaa akka hin taane ibseera jedhan Obbo Getaachoon.
Qaamni bara ormi biyya bulchaa ture nama tokko irratti tarkaanfii hin fudhanne amma maaliif Oromoo ajjeesa kan jedhamu kun beekamuu qaba.''
Maqaa kanaan qaamni nageeny biyyaa jeequ kun dhuguma Oromoo fi Oromiyaa keessatii? kan jedhus shakkiin qaba jedhan.
Kanaaf uummata waliin tahuun qoratamee beekamuu qaba jedhan.
Bakka adda addaatti gaggeesitootni uummata tajaajila turan ajjeefaman akka jiran yaadachiisanii yoo rakkoo qabaatan seeraan gaafatamu malee ajjeefamuu hin qaban uummatuma kana keessaa bahan waan taheef jedhan.
Buraayyuutti maaliif hidhaa fi rakkoon nageenyaa baay'ate?
Tibba ABO'n biyyatti gale sirna simannaa ho'aa taasifameen booda rakkoon nageenyaa magaalaa Buraayyuu keessatti uumame lubbuu namootaa galaafateera.
Ergasi hidhaan magaalicha keessatti akka dabalaa dhufes ni himama. Haa tahu malee rakkoon akkasii maaliif magaalichatti hammaate gaaffii jedhu Obbo Geetaachoon Buraayyuu keessa sabaa fi sablammoota hedduutu jiraata.
Yakkoota achitti raawwatan ammoo maqaa 'Abbaa Torbee' jedhu qofatu itti kenname malee waan adda bahe hin jiru.
Gareen shororkaa uumu kun murna siyaasaamoo garee ajjeechaati kan jedhu qoratamuu qaba jedhan. Magaalaa Buraayyuu keessatti akkuma magaalota kaan keessatti mudatu rakkoon ni uumama jedhan. Kun ammoo caasaan nageenyaa waan hojjechuu qabu hedduun akka jiru namatti agarsiisa jedhan.
Nageenya kana qaama booressutu osoo hidhama tahe nageenya waaraa fiduun danda'ama. Amma eenyu akka tahe hin beekamu. Caasaan nageenyaa yeroo deemu namni yoo fiige ykn baqate mallattoo argu irraa ka'uun tarkaanfii fudhachuunsaa hin oolu.''
Garuu shakkamtootni to'ataman qulqullaa'anii adda bahuu qabu jedhan Obbo Geetaachoon. Uummatnis kana adda baasuu keessatti gumaacha isaa bahuu qaba jedhanii duuti qaama hin beekamneen raawwatu kunis dhaabbachuu qaba jedhan.
13 Fuulbaana 2019